Namni tokko sagantaa TV tokko natti erge, dubbiin huuba turte, kan dhimma baasef akka jiru waan hubadheef waa jechuu barbaade. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsNamni tokko sagantaa TV tokko natti erge, dubbiin huuba turte, kan dhimma baasef akka jiru waan hubadheef waa jechuu barbaade.
Bara Wayyaanee ciisanii kan jedhu nu hinilaallatu, nuti ciifnee hinbeeknu. Qabsoon bilisummaa haala qabsicha mudate waliin takka takka laafaa yeroo kaan jabaataa deemu mala. Garuu warri ofii ciisaa bahee eengadda qabsoo qeerrotiin aangon itti mul’annaan dammaqe, warri waggoota 27 ergamaa bahe, saba keenya irratti Wayyaanef meeshaa tahe gidiraa raawwachaa ture, osoo safuu beekee,nuun ciisaa baatan jechuuf haamilee hinqabaatu.
Maalirratti obsa dhabnee? Seensa hoggana ABO irratti hookkara yemmuu kaasan, nama simannaaf dhufe, Burraayyuu irratti yemmuu ugguran, ajjeesan, hogganoota ABO hoteela Giyoon qubate ajjeessudhaaf hoomaa baasanii poolisiin hindeebifnee maal dubbanne? HD-dhaabbichaa akka Eritiraa irraa biyya hinseenne guyyaa simannaa jalaan gahanii, tikeettii xiyaaraa yeroo dhoowwatan,himanne? Dirree buufata xiyaaraa Booletti yaalin ajjeechaa yemmuu raawwatamu, hoteela Ilillii keessatti waan ta’e, yeroo Hogganoota WBO mariisisuuf Beegii dhaqanitti, Mandii irratti yaalii ajjeechaa harkaafi harkatti qabame himannee, hoo’ifannee?
Dhuguma alagaan jedhame, hanga keenya mataa gad-qabatee? “Yoo barbaanne, reenfa miliyoona 20 lakkoofsisuu dandeenya!’ kan jedhee dhaadate bar nuu mitii. “Road Map nutu tolcheef, nutu hooggana kennaafi jira. Namni akka abaluu faa biyya keenya bulchuu mitii itti dhalachuuf gahuumsa hinqabu. Nu qixa uumaatti kabajamuu qabna, Oromoo nutu kanaaf sana barsiise…” maal hinjedhin?Maal hinjedhamin? “Barri keenya, yeroo keenya!” jedhee nutu fandala’ee? Har’a Qeerron jijjiirama fidde eessa jirti?
Kan hanga keenya obse, kan akka keenya mataa gad-qabatee waa hunda danda’e inuma hinjirre. Miidhamaa maqaa balleessun garuu sirrii miti. Tole, nuti mootummaan xiiqii qabanne haa jennu, gabbaruufii diddan jechuu sanaaf. Warri abdatee itti gale, warri “sumaaf yoo harka rukunne ni gaha!” jedhee sagada Waaqaf male kenneef eessa jira. Warri nu busheessaa midhaawuf carraaqe hoo? Warri amanee sirree jalatti qabuu dhama’e hoo?
Hanga meeqa hiitanitti nama bakka buufna? 50,000 harkaa qabdu, meeqa itti isiniif daballa? Hidhaa itti fufee jiruuf nama hingeeddarre jechuun, kan hafe naaf eeri jechuudha! Kan hidhame, yakka hidhamee osoo qabaatee, adeemsa seeratiin osoo murtoo argatee, ni fakkaatti ture.
Namoota A/alangaa galmee isaanii cufe sirna hidhee taa’uf nama mormu Oromoo keessaa argutu salphina!
Dhaabbiileen barnootaa Oromiyaa keessaa sadarkaa jalqabaa irraa eegalee hanga Yuunivarsiitiileetti poolisii federaalaan akka eegamu murteeffama. Poolisootni Oromiyaa eegumsa irratti yoo hirmaatan illee ajajni federaala irraa akka kennamu murteeffame. Kunis hiriira deeggarsaa Mootummaa Ce’umsaa biyyoolessaa oromiyaa manneen barnootaa keessatti taasifamaa jitu duubaan poolisootni Oromiyaa deeggaraa jiru jedhamee erga gamaggamamee booda. Qabsoon tokkummaadhaan itti fufa
Garboomsaan ni kufa
የሲዳማ ህዝብ በልጆቹ መስዋዕትነት ያገኘውን የራስን በራስ ማስተዳደር ውጤት በኦፊሴላዊ መንገድ ዛሬ የመመስረቻ ስነስርዓት እየደረገ ነው::